मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । ग्रामथानको अध्यक्षमा कांग्रेसका जयप्रकाश गच्छदार थारु ७ हजार ६०५ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका शिवना...
राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । देशको राजधानी रहेको काठमाडौं जिल्लाका १० नगरपालिकामध्ये ६ वटामा नेपाली कांग्रेस, ६ व...
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा ऐनबहादुर चन्द र उपाध्यक्षमा ...
ललितपुर महानगरपालिकाको ताजा अपडेट : कसको कति मत ?
ललितपुर महानगरपालिकामा शुक्रबार बिहानसम्म कुल ४४८९९ मत गणना सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो मतपरिणमअनुसार नेपाली काँग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनले अग्रता फराकिलो बनाएका छन् । गठबन्धनको समर्थनमा मेयर उ...
व्यासको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीको अग्रता
महोत्तरीमा थप तीन तहको परिणाम सार्वजनिक
महोत्तरीमा थप तीन स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय बर्दिबास र औरही नगरपालिका तथा सम्सी गाउँपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो । बर्दिबासमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई ...
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा माओवादी विजयी
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। अध्यक्षमा निमा लामाले १६२४ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी धन बहादुर गुरुङल...
एमालेलाई हराउँदै कागेश्वरीको मेयरमा कांग्रेस विजयी
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार उपेन्द्र कार्की निर्वाचित भएका छन् भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी शान्ता थापाले जितेकी छन् । अन्तिम म...
काठमाडौंमा ७१ हजार २०९ मत गणना : कसको कति मत ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको अग्रता कायमै छ । शुक्रवार बिहानसम्म ७१ हजार २०९ मत गणना हुँदा साहले १२ हजार २१५ मतको अग्रता कायम गरेका छन् । ताजा मत परिणाम अनुसार साह...
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको अग्रता कायमै छ । शुक्रवार बिहानसम्म ७० हजार ५३५ मतगणना हुँदा साहले १२ हजार १५८ मतको अग्रता कायम गरेका छन् । ताजा मतपरिणाम अनुसार साहले...
मुसिकोट नगरपालिकामा माओवादीलाई कांग्रेसले १३ मतले जित्यो
रूकुम पश्चिमीको मुसिकोट नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको छ । नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसी ६ हजार ९१४ मतसहित विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका बसन्तकुमार शर्...
उर्लाबारी नगरपालिकामा एमाले विजयी
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवैमा एमाले विजयी भएको हो । मेयरमा गंगाप्रसाद खरेल र उपमेयरमा मिनाकुमारी खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । ...
रास्कोटको मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादी विजयी
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका धर्मराज शाही विजयी भएका छन् । शाहीले ३०४६ मत पाएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका दयाराम सिम्खाडाले २ हजार ११७ मत पाएका छन्...